खसीबोका बिक्री प्रतिकिलो रु. ५६० मा बिक्री - bampijhyala.com
Home > चाडपर्व > खसीबोका बिक्री प्रतिकिलो रु. ५६० मा बिक्री
२ कार्तिक २०७७, आईतवार १८:५५ bampijhyala
बाँपीझ्याला, कातिक २, काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रतिकिलो रु ५६० मा खसी तथा बोका बिक्रीवितरण गर्ने भएको छ । दाङ र मकवानपुरको मजवानपुरबाट यस वर्षको बडादशैँका लागि पहिलो चोटि खसी तथा बोका काठमाडौँ आइपुगेपछि कम्पनीले मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयानुसार सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित तीन संस्थानले चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्यका पसलमा दिइएको छुटस्वरुप खसीबोकामा प्रतिकिलो रु दश छुट दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुुसार पहिलो चरणमा दाङबाट दुई सय र मकवानपुरबाट २०५ गरी ४०५ खसीबोका काठमाडौँ आइपुगेको छ । यस वर्ष कम्पनीले दुई जिल्लाबाट एक हजार खसीबोका ल्याउने तयारी गरेको छ । मुस्ताङबाट एक हजार च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको कम्पनीले गत वर्षको तुलनामा बढी मूल्य भएपछि अन्तिममा नल्याउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
२ मंसिर २०७७, मंगलवार १३:४२ bampijhyala 0
छठपर्व भोली देखि शुरु : उत्साहका साथ तयारी
बाँपीझ्याला, जनकपुर । धार्मिक एवं लोकआस्थाको पर्व छठको तयारी...
२९ कार्तिक २०७७, शनिबार ११:२० bampijhyala 0
यमपञ्चकको तेस्रो दिनः कुकुर तिहार
यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज इमान्दारीपूर्वक घरको सुरक्षामा खटिने कुकुरलाई...
चीनमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिअन्ट फैलिन थालेपछि बढ्दो चिन्ता २ कार्तिक २०७७, आईतवार १८:५५
२ हजार २७९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि, २३ जनाको मृत्यु २ कार्तिक २०७७, आईतवार १८:५५
आज दोलखामा थप ३८ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ संक्रमण मुक्त, ९ दिनमा २१० जना संक्रमण बृद्धि २ कार्तिक २०७७, आईतवार १८:५५
अमेरिकाले आफ्नो फौज फिर्ता लिन गरेको आकस्मिक निर्णय देशको खस्कँदो सुरक्षास्थितिको प्रमुख कारक हो : अफगानिस्तान राष्ट्रपति घानी २ कार्तिक २०७७, आईतवार १८:५५
प्रमोद खरेलको ‘बैगुनी’मा आस्था र दीपक (भिडियोसहित) २ कार्तिक २०७७, आईतवार १८:५५